UGoogle uza kusebenza kwi-smartphone esongiweyo | I-Androidsis
Ii-smartphones ezisongelayo yenye yeefashoni ezinkulu okwangoku kwi-Android. Ezi zimbini zokuqala sele zinikezelwe ngokusesikweni, ikwangaba Galaxy Fold kunye Huawei Mate X. Ukongeza, zininzi iimveliso ezisebenza ngoku kwi-smartphone yazo yokusonga. Ezinye zazo sele ziqinisekisiwe, njenge Motorola y imbeko. Kodwa sinokongeza iGoogle kolu luhlu, ngokwamahemuhemu amva nje.
A patent yeselfowuni esongekayo evela kuGoogle. Ifemu yaseMelika ayiqinisekisanga kwanto, kodwa ngekhe kumangalise ukuba ngaxa lithile kwixesha elizayo sinomnxeba onjalo. Kule fowuni sifumana isonga esinye, esiya ngaphakathi kule meko.
Nangona okwangoku yimizobo kuphela ekwisigaba sokuqala. Ke asinazo iinkcukacha ezininzi malunga nazo okwangoku. Kodwa ubuncinci banokuba ngumqondiso ocacileyo wokuba uGoogle naye ulungiselela ukungena kwintengiso yefowuni enokusonga ngaxa lithile.
Ilungelo elilodwa lomenzi likaGoogle likhumbuza imodeli ukuba Isamsung isandula ukuba nelungelo elilodwa lomenzi wechiza. Isebenzisa inkqubo efanayo naleyo yefowuni yeHuawei. Ke isebenzisa isikrini esinye, esiya kuba nakho ukusonga. Kule meko isonga ngaphakathi. Xa ifowuni ivaliwe, isikrini sijonge ngaphakathi.
Okwangoku kusekutsha kakhulu ukuba ungathetha ngakumbi ngefowuni. UGoogle akaphendulanga kula marhe. malunga nale fowuni ye-smartphone esibonayo kwimarike. Ke kuyakufuneka silinde ukufumana okungakumbi malunga nayo. Kuba khange kubekho zindaba malunga nesi sixhobo.
Ngale ndlela, uphawu olunye ngakumbi kwi-Android longezwa kulo mkhwa wokugoba iifowuni. Ukujonga phambili kulo nyaka sinokulindela ezinye. Nangona iimveliso ezininzi ziya kulinda de kube li-2020, ukuze imveliso yazo isekwe, ukongeza ekuhlengahlengiseni usetyenziso. Asazi kwanto malunga nokuba esi sixhobo sikaGoogle siza kufika nini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UGoogle uya kusebenza kwifowuni esongiweyo
I-WhatsApp iya kudibanisa isikhangeli sayo sewebhu kwisicelo